192.168.8.1 - Ọbịbịa
Chepụta eriri ikuku site na ike Eleghị anya AC ma ọ bụ N rawụta. You na-ahọrọ njikọ ntanetị maka PC gị? Enweghị nsogbu. Site n'ụzọ nke ndị pụtara ìhè routers ị surly ga-enwe a ufọk ufene & ngwa ngwa njikọ Internetntanetị.
Ndị na-ahụ maka ụgbọ mmiri nwere ezigbo firewall nke na-enyere aka n'ichebe netwọk gị nke ụlọ na-enweghị ike ịnweta ịntanetị. Dị ka firewall a na-egbochi njikọ dị n'ime, ị nwere ike ịchọ ịmepe ọdụ ụgbọ mmiri site na ya maka ngwa na egwuregwu. Usoro a nke oghere ọdụ ụgbọ mmiri na-abụkarị nke a maara dị ka ọdụ ụgbọ mmiri na-aga n'ihu n'ihi na ị na-eziga ọdụ ụgbọ mmiri na ịntanetị na netwọk gị.
Site na Igwe ntanetị 300N nke dị nso ị nwere ike ịkekọrịta njikọ net gị na oke ọsọ ọsọ na 300Mbps. Nke a siri ike Ikuku N rawụta na-esote abụọ aerials ọtụtụ adahade gị wireless nso. Nanị tinye ọtụtụ ndị ọrụ, eriri ma ọ bụ ikuku. Nwee uru nke nnukwu ọsọ, & usoro enweghị mbọ iji gosipụta njikọ gị. N'ihi na elu na-agba, na Ikuku rawụta bụ ezigbo maka egwu na-akpọ online egwuregwu & nkwanye music & video.
Maka ndị ahịa netwọkụ kaara mma, ọ bụ ihe ziri ezi ịghọta na Onye na-ahụ maka Ikuku Router nwere ọtụtụ atụmatụ dị mgbagwoju anya. Tinye WDS & Ikuku Bridge na-arụ ọrụ iji mụbaa akara gị wireless. N'ihi nnukwu ọsọ processor & 'Traffic achọpụta' IP ọ bụla, ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ Protocol, ị nwere ike ijide n'aka na ị nwere ike igwu egwu mgbe niile ma ọ bụ sọfụ ịntanetị kachasị ọsọ.
Enwere ike ịgbakwunye SSID ndị ọzọ gbakwunyere gbakwunyere ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Nke a na - enye gị ohere ịhazi netwọkụ nke abụọ maka ndị ọrụ ọbịa ọsịsọ. Nke a dị mma maka ebe azụmahịa dị ka ụlọ nkwari akụ ma ọ bụ hotspot, dịka ọmụmaatụ, ebe ịchọrọ ịkewapụ ndị ọbịa na netwọkụ azụmahịa gị.
Enwere ike iji ngwa ntanetị 300N dị nso na-enweta ihe eji enweta 54 Mbps & 11 Mbps ngwaọrụ. Maka ọnụọgụ zuru ezu na ọsọ nke gburugburu 300 Mbps, a gwara gị ka ị tinye ndị na-ahụ maka ntanetị ikuku mara mma.
Isi usoro imeghe ọdụ ụgbọ mmiri bụ:
Dezie adreesị IP edobere na PC gị ma ọ bụ ngwa ọrụ ịchọrọ iji zipu ọdụ ụgbọ mmiri.
Banye n'ime pụtara ìhè rawụta.
Gaa n'ọdụ ụgbọ mmiri ebugharị nke.
Na ịpị na Mbido Ngwaọrụ mgbanwe.
Na ịpị njikọ Mbido Ọganihu.
Na ịpị na NAT / mgbasa ozi.
Na ịpị Port Advanced.
N'ịwa ntinye ọdụ ụgbọ mmiri.
Agbanyeghi na usoro dị otu a nwere ike ịpụta aghụghọ na mbido, gafee usoro niile nke ngwa ngwa gị.
Ọ dị mkpa ịtọlite ​​adreesị IP nke nwere ngwa ọrụ nke ibugharị ọdụ ụgbọ mmiri. Nke a na-ekwe nkwa na ọdụ ụgbọ mmiri ga-emeghe ọbụna mgbe ngwá ọrụ reboots. Mgbe ị na-edozi adreesị IP dị na ngwaọrụ ịchọrọ ịbanye na rawụta.
Ugbu a, ị ga-abanye n 'ọbịbịa rawụta. Onye ntanetị nwere ntanetị weebụ, yabụ ị nwere ike ịbanye na ya na ihe nchọgharị weebụ. Nke a nwere ike ịbụ Google Chrome, Edge, Opera, ma ọ bụ Internet Explorer. Ọ dịghị mkpa ọ bụla nchọgharị ịchọrọ iji. Enwere ike ịkpọ adreesị IP nke rawụta gị dị ka ụzọ ndabara PC.